Rimwe gore, chimwe chiitiko, chimwe chiitiko chinoshamisa… Iyo yaive YII2019 kwandiri! - Geofumadas
Gumiguru, 2019 Innovations, Microstation-Bentley
Pandakaudzwa kuti ndichave nemumwe mukana wekuve chikamu chechiitiko chikuru cheInsource chegore, zvakandiita kuti ndidanidzire nemufaro. YII2018 muLondon, pamusoro pekuva imwe yenzvimbo dzandinofarira dzezororo, yaive chiitiko chinoshamisa nehurukuro dzakasarudzika nevatungamiriri vepamusoro kubva kuBentley Systems, Topcon nevamwe, hurukuro dzakasimba uye zvikamu zvine ruzivo. Bentley Systems yakamutsiridza pfungwa ye "mapatya edhijitari" uye ndeipi nzira iri nani yekupupurira shanduko muindasitiri yekuvaka pane kuve nevakavaka ivo pachavo. Iyo mecca yezvivakwa yakanga yaunza pamwechete vafungidziri vatungamiriri kubva kunenge maindasitiri ese uye nekugovana ruzivo, network, uye kubatana kwakaitika kwaive kupfuura mazwi.
Ini ndaive munzvimbo chaiyo yekukwiridzira shungu dzangu dzekunyora nezve indasitiri yekuvaka. Kubva kuDhijitari Yekufambira Mberi maAfrium kuti ndishandise makesi, ini ndaida kutora zvese zviri mundangariro dzangu ndobva ndazozvichinja kuita nyaya yakasarudzika. Yakazara neruzivo, ndadzoka chete, ndakakwanisa kugadzira zvinyorwa zvinomanikidza vaverengi vangu. Chishuwo chekusangana nevarume vemuindasitiri yekuvaka gore rinouya chaive chipenyu uye zvakanyanya, kunyanya nekuti Singapore iri padyo nepamba. Ndiine maawa mashanu chete uye nemaminetsi makumi mashanu nemashanu yenguva yekubhururuka, ini handina kukwanisa kuipotsa!
Yakasvika musi waGumiguru 20, 2019 uye ini ndaive kune yakanaka kwazvo Marina BaySands, Singapore. Pandakaongorora yavo Rooftop Infinity dziva nzvimbo, kushingairira kwangu kwakapetwa kaviri. Icho chishamiso chekuvaka chiri chega, seguta diki rine zvitoro, nzvimbo yekuratidzira, husiku kirabhu, kasino, dare rezvikafu uye chii chimwezve ...
Yakareba yakamirira YII2019 Media Day yakatanga mangwanani anonakidza aOctober 21. Iyo inosimudzira zvikuru musangano wenhau yakaburitsa nhau dzakakosha senge:
Bentley Systems neTopcon Positioning Systems inotangisa yavo yedhijitari yekuvaka mubatanidzwa.
Bentley Systems inosimbisa iyo Dhijitari Cities inopa nekutora kweCitilabs uye geospatial orbit technologies.
Dhijitari Yekuvaka Inoshanda inozivisa munharaunda yayo yekubatana uye kubatana neO3 Solutions kutsigira yakakwira mabasa ekutakura mabasa.
Geofumadas akapinda chiitiko ichi kwemakore gumi nematanhatu akateedzana, mune yangu inguva yechipiri uye kekutanga sechikamu chemagazini yeTwinGeo / Geofumadas. Kubvunzurudza nekukurumidza nevatungamiriri vakuru paBentley Systems yaive chiitiko chinonakidza chakawedzera ruzivo rwangu rwemapatya edhijitari, mainjiniya egeotechnical, mainjiniya echimiro, maguta edhijitari, nezvimwe zvakawanda ...
Networking, kubatana neshamwari dzechinyakare uye nyowani panguva yekudya kwemasikati uye tii yekuzorora yakagadzira chero nguva inonakidza; Ini ndakanyatso kutora chirevo chezuva racho mu tweet yakatanga kuve yakakurumbira.
Ndiri pano nekunakidzwa nekushanduka kweminiti yega yega .. gore rechipiri chiitiko chinonakidza zvakafanana ☺️ #YII2019 @BentleySystems @GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
- SHIMONTI PAUL (@shimontipaul) October 21, 2019
Zuva rakapfuura rakazopera nekudya kwemanheru kwakarongeka paClifford Pier inonakidza paFullerton Bay Hotel.
Mazuva anotevera, Gumiguru 22, 23 uye 24 kuburikidza nezvinonakidza ACCELERATE zvikamu, maindasitiri mafupi, zvakandibatsira kuongorora munyika yeDhijitari Mapatya. Nguva dzose ndakatsunga kuziva mashandisirwo ezvinhu uye kutyaira shanduko muicho chaicho nyika, mashandisiro emashandisirwo uye mharidzo dzekupedzisira dzakandibata. Husiku hweYII-Mubayiro nehunaku hwayo uye kunyemwerera zvinoda kutaurwa kwakakosha.
Zviziviso zvikuru zvakaitwa muchiitiko ichi:
Bentley Systems inounza AssetWise Dhijitari Twin Services uye OpenUturance Dhijitari Twin Services yezvinhu uye kushanda kwetaneti.
Kirasi Yako Yako inosheedza kusangana kwekoroji yechikoro neWindows Systems.
Bentley Systems inobatana senhengo yemarudzi - inozivisa IFC tsigiro yemapatya edhijitari.
Bentley Systems inozivisa itsva iTwin gore remasevhisi ekuvaka zvivakwa engineering digital mapatya.
By Shimonti Paul, Kubvunza Mupepeti, TwinGeo
Previous Post«Previous Nyowani iTwin gore remasevhisi eDhijitari Mapatya Ekuvaka Injiniya
Next Post Geo-Injiniya & TwinGeo Magazini - Yechipiri EditionNext »
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Revit yekugadzira mapurojekiti ezvivakwa mune ino kosi isu tinotarisa kukupa iwe ...
PTC CREO Parametric Kosi - Dhizaini, kuongorora uye kuenzanisa (1/3)
CREO ndiyo 3D CAD mhinduro iyo inokubatsira iwe kumhanyisa chigadzirwa utsanzi kuti ugone kugadzira zvirinani